Meelo Fudud oo Loogu Dhiibo Guriga: Maalgelinta mustaqbalka Minnesota
Warbixin ka timid Minnesota Task Force Force - Soo koobista Fulinta
Halka aan ku noolahay arrimaha; waxay ku xiran tahay dhinac kasta nolosheena.
Guusha noloshu waxay ka bilowdaa guriga da 'walba iyo dhammaan dadka. Markaan heysano meel ammaan ah, meelo ammaan ah oo ay ku noolaadaan, waalidku waxay kasbadaan wax badan, caruurtu waxay bartaan si ka fiican, caafimaadkooda iyo fiyoobkooda wanaajinta, bulshooyinku way ku barwaaqoobaan, anaguna waxaynu ku wada naqaannaa
Dhammaanteen waxaan ku niyad-dhisnaa marka qoysasku ay leeyihiin meel wanaagsan oo ay ku hoydaan madaxooda habeenkii-haddii ay yihiin kiro ama mulkiilayaal. Kursiga guriga ee xasilloon oo saldhig u ah mustaqbalka
Dhammaanteen waxaan ku niyadjabnaa marka aan ku noolaan karno meel u dhow meeshana shaqadeena, yaraynta wakhtiga iyo kharashka safarka iyo ka tagitaanka waqti dheeraad ah bulshada, caafimaadka iyo
Dhammaanteen waxaan ku niyad-sameynaa marka carruurtayadu leeyihiin baaritaan Ammaan ah oo muujinaya in carruurta ay u badan tahay inay dugsiga ku guuleystaan oo ay mustaqbalka shaqo helaan mustaqbalka marka aanay ku dhibin walaaca ay ku fikirayaan meesha ay seexanayaan.
Dhamaanteen waxaan ku niyadjabnaa markii kuwa naga mid ah ee u baahan khayraadka daryeelka caafimaadka lagu taageeri karo halka aan ku noolahay. Dadka haysta guryo ammaan ah waxay si joogto ah u gali karaan daryeelka caafimaadkooda
Dhammaanteen waxaan ku niyadjabnaa marka ay Minnesota leedahay dariiqooyin xoog leh si ay u dhistaan maaliyad iyada oo loo marayo mulkiilaha guryaha. Milkiilayaasha guryaha waxay dhisi karaan oo ku gudbin karaan hantida, kuwaas oo gacan ka geysan kara burburinta wareegga saboolnimada iyo abuurista ilaha si loo maalgaliyo guud ahaan
Dhammaanteen waxaan ku niyad-samannaa markaan hubinno in waayeelkeenu isku-dhafan yihiin beelaha degaanka oo aan dooran karno meel ay ku noolaadaan kuwaas oo ka soo baxa jirkooda, garashada iyo bulshada
Maalgashiga ugu faqiirsan ee aan ka dhigi karno mustaqbalka dawlad-goboleedka wuxuu hubinayaa aasaaska bulshooyinka xooggan iyo guryaha xasilloon ee dhammaan dadka reer Minnesota.
Minnesota, waxaan ka helnaa bulshooyin firfircoon iyo dhaqaale firfircoon oo lagu dhisay hab nololeed iyo awood-u-helid-kuwaasi oo na siinaya faa'iido xooggan tartanka, qaranka iyo caalamkaba. Ganacadaheena maxalliga ah ayaa soo jiidanaya shaqaale u gooni ah, kulliyaddeenna iyo jaamacadaheenu waxay qori karaan tayo sare leh, magaalooyinkeena iyo xaafadahuba waxay ku faanaan bulshooyin xooggan oo soo dhaweyn leh.
Guriyahayagu waa aasaaska beelaha soo jiidanaya; waxay kor u qaadaan mashiinka dhaqaalaheena. Qofna ma horumarin haddii aan qiimeeyno dadka da'da yar ee haysta awooda iyo xirfadaha lagu xoojiyo ganacsigeena. Qofna ma fiicna haddii ganacsiyada ay ka baxaan gobolka maxaa yeelay ma soo jiidi karaan oo haysan karaan shaqaale. Qofna ma fiicna haddii qoysasku ay ku adagtahay inay saqafka ka dul dhigaan madaxooda. Dad badan oo reer Minnesota ah oo ku guuleysta, ayaa Minnesota intaa ku sii badanaysa-waxaanan xaqiijinay inaan helno rabitaanka, hal-abuurnimada, iyo xalalka sidaa loo sameeyo.